Musharax kashifay sababta Puntland iyo Jabbaland u taageri waayeen Dowladda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Musharax Madaxweyne Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa ka hadlay sababta loo fulin la’yahay heshiiskii laga gaaray doorashada dalka ka dhaceysa ee xiligaan uu khilaafka ka taagan yahay.
Mustaf Dhuxulow ayaa waxaa uu sheegay in heshiiskaas laga gaaray Doorashada uu hirgeli waayay mas’uuliyad darro siyaasadeed iyo is aamin la’aan darteed, isagoona sababta keentay arrintaas uu ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo.
Waxaa uu sheegay Madaxweynaha in uusan ugu tala-gelin in isaga iyo Madaxweyneyaasha maamul Goboleedyada dalka iska fahmaan arrimaha siyaasadda dalka oo uu xusay in muhiim ay aheyd in laga wada shaqeeyo.
Hadalkaan ayuu Musharax Madaxweyne Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ka sheegay Shirka Machadka Cilmi baarista ee Heritage ee ka socda Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal.
Cabdullaahi Sanbaloolshe oo weerar Afka ku qaaday Madaxweyne Farmaajo